2022 အတွက် အကောင်းဆုံး CBD Capsules (ကြိုးစားပြီး စမ်းသပ်ထားသည်) - shopgiejo.com
2022 အတွက် အကောင်းဆုံး CBD Capsules
ဇန်နဝါရီလ 13, 2022
CBD ပံ့ပိုးပေးသည့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာကြောင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် CBD-ထည့်သွင်းထားသော ထုတ်ကုန်များကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ဆီများအပြင်၊ CBD capsules များသည် CBD အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားရန် ရေပန်းအစားဆုံးနှင့် ကျယ်ပြန့်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
CBD Capsules ၏ထိပ်တန်းအကျိုးကျေးဇူးများ
CBD-ထည့်သွင်းထားသော ဆေးတောင့်များသည် ယူရလွယ်ကူပြီး အဆင်ပြေသည်။ သင်ဘယ်သွားသွား သယ်သွားလို့ရသလို ခံစားရတဲ့အချိန်တိုင်း ယူသွားလို့ရပါတယ်။ ဆေးတောင့်များသည် သီးခြားဖြစ်ပြီး ဗီတာမင် သို့မဟုတ် OTC ဆေးများနှင့် တူသည်။
၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူး CBD ဆေးတောင့် အဲဒါက သူတို့ လာကြိုတယ်။ ၎င်းသည် သင်၏ CBD ဆေးပမာဏကို တိကျပြီး တသမတ်တည်းထားရှိရန် ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်အချိန်တိုင်းတာမှုဆုံးရှုံးရန်မလိုအပ်ပါ။ CBD အဆီများ - ဆေးတောင့်ကို ပါးစပ်ထဲထည့်ကာ ရေ သို့မဟုတ် သင်နှစ်သက်ရာဖျော်ရည်ဖြင့် ဆေးကြောလိုက်ပါ။
ထို့ထက်မက၊ CBD capsules သည် လျှော်ပင်၏ မြေဆီလွှာအရသာနှင့် သကြားပါ၀င်မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်စေပါသည်။ CBD gummies.
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် CBD Capsules အမျိုးအစားများ
ဆေးတောင့်များနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် အဓိက အမျိုးအစားသုံးမျိုး ရှိသည်- Soft gels၊ standard capsules နှင့် tablets။ ဒီတစ်ခုချင်းစီကို ဘာတွေထူးခြားစေသလဲ ဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Soft Gel CBD Capsules
အပျော့စား gels များတွင် ဂျယ်လာ၊ ရေ၊ opacifier နှင့် ပလပ်စတစ်ဆားများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဆေးတောင့်တစ်ခုထဲသို့ အလုံပိတ် CBD ဆီ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အာဟာရဓာတ်များ ကြွယ်ဝပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖြိုခွဲရန်အတွက် အရိုးရှင်းဆုံး ဆေးတောင့်ပုံစံဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်ရလဒ်များကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Standard CBD Capsules
CBD capsules ၏စံဗားရှင်းသည် soft gels နှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းတို့တွင် CBD ရေနံကို အစာခြေစနစ်တွင် ဖြည်းညှင်းစွာ ဖြိုခွဲပြီး သွေးကြောထဲသို့ စုပ်ယူသွားသည့် မာကျောသော အခွံတွင် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ယင်းတို့သည် အကျိုးသက်ရောက်ရန် နှစ်နာရီအထိ ကြာနိုင်သည်။
CBD တက်ဘလက်များသည် CBD ကိုတက်ဘလက်တစ်ခုအဖြစ်ချုံ့ထားသည်။ ၎င်းတို့ကို cannabinoids ၏ အသန့်စင်ဆုံးပုံစံဖြစ်သည့် CBD isolate ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ တက်ဘလက်များသည် မျိုချရလွယ်ကူပြီး မိနစ် 30 မှ တစ်နာရီအတွင်း ရလဒ်များကို ရယူနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် အကျိုးသက်ရောက်မှုက ကြာရှည်ခံပါတယ်။
အစွမ်းသတ္တိနှင့် ရလဒ်များကို သေချာစွာသုံးသပ်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 2022 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး CBD ဆေးတောင့်များစာရင်းကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသော စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီအတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ပေးဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီများကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါသည်။
JustCBD စားသုံးသူများ၏ အမှန်တကယ်တန်ဖိုးကို ပြသရန် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မိခင်ရဲ့သဘာဝက အကြီးမားဆုံး အံ့ဖွယ်ပါပဲ။” အမှတ်တံဆိပ်သည် 2017 ခုနှစ်ကတည်းက တည်ရှိလာခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ အဖွဲ့သည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များတွင် ပါဝင်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို ထုတ်ဖော်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီကို ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် တစ်ခုချင်းစီသည် တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးနှင့် ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများကို လိုက်နာပါသည်။ ၎င်းတို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် COA ကိုသင်ရှာနိုင်သည်။
CBD Capsules စွမ်းအင်ဖော်မြူလာ
ဆေးတောင့်တစ်ခုလျှင် CBD ၏ 25mg
JustCBD စွမ်းအင်ဖော်မြူလာ CBD Capsules
အဆိုပါ စွမ်းအင်ဖော်မြူလာ JustCBD မှ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အား အစွမ်းထက်သော မြှင့်တင်မှုပေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဗီတာမင် A၊ ဗီတာမင် E၊ ဗီတာမင် D၊ ဗီတာမင် B6၊ thiamin၊ ဗီတာမင် B12 နှင့် riboflavin တို့ပါရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ဆေးတောင့်တစ်ခုစီတွင် CBD isolate 25mg ပါ၀င်သည်။ စံဆေးတောင့်ပုံစံသည် မျိုချရလွယ်ကူပြီး ရလဒ်များ အလွန်လျင်မြန်ကြောင်း သိလိုက်ရသည့်အတွက် ကျေနပ်မိပါသည်။ ပိုမိုအားအင်နှင့် ထက်မြက်မှုကို ခံစားနိုင်ရန် မိနစ် 30 ခန့် အချိန်ယူရသည်။ ဒါ့အပြင် တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းဖို့ အာရုံစူးစိုက်မှု ပိုရလာသလို စိတ်အားထက်သန်မှုလည်း ခံစားရကြောင်း သိလိုက်ရတယ်။
CBD Capsules - ဗီတာမင်အစုံဖော်မြူလာ
၎င်းသည် သင့်အား ကျန်းမာသော အစားအစာကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည်။
JustCBD Multivitamin Formula CBD Capsules
အဆိုပါ Multivitamin ဖော်မြူလာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဗီတာမင် D၊ A၊ B12 နှင့် B2 တို့ ကြွယ်ဝသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင် CBD isolate ၏ 25mg ပါ ၀ င်ပြီးကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာသောဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းပြီး ကျန်းမာသော အစားအစာကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည့် အံ့သြဖွယ် အာဟာရဓာတ်များ ရောစပ်ထားသည်။
CBD Capsules - ညအချိန်ဖော်မြူလာ
ထူးခြားသော Melatonin နှင့် CBD isoalte ဖော်မြူလာ
ကိုယ့်ကိုကိုယ် သက်တောင့်သက်သာ အိပ်ပျော်စေဖို့အတွက် ကောင်းပါတယ်။
JustCBD ညအချိန်ဖော်မြူလာ CBD Capsules
အဆိုပါထူးခြားသော ညအချိန် ဖော်မြူလာ JustCBD မှ Melatonin နှင့် CBD ၏ 25mg ပေါင်းစပ်ထားသည်။ Capsules များသည် ဗိုက်အောင့်ခြင်းကို သက်သာစေရန် ကူညီပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် စိုးရိမ်ပူပန်မှု လက္ခဏာများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကူညီပေးသောကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် ကျန်းမာသော အိပ်စက်ခြင်းသို့ သက်သာစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် မည်သည့်အရသာမှ မရှိပါ။ မနက်ခင်းမှာ လန်းဆန်းတက်ကြွမှုကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ယနေ့ လျှော်ကိုချစ် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ထိပ်တန်းပေးသွင်းသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး အများအပြားက ၎င်းအား UK လျှော်စက်ရုံတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး ဆန်းသစ်သောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဟု ယူဆကြသည်။ ကုမ္ပဏီသည် လက်ရှိတွင် လန်ဒန်ရုံးချုပ်တွင် လုပ်ကိုင်နေသော်လည်း အမျိုးမျိုးသော အမျိုးအစားများကို ကမ္ဘာအနှံ့ ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ၎င်းကို Grazia၊ BBC၊ Forbes နှင့် Men's Health ကဲ့သို့သော ထင်ရှားသောဆိုင်များတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ Love Hemp သည် အကောင်းဆုံး CBD အမှတ်တံဆိပ်အတွက် 2020 Beauty Shortlist Award ကို ရရှိခဲ့သည်။
Hemp CBD Capsules ကို ချစ်ပါ။
သက်သတ်လွတ်နှင့် gluten- အခမဲ့
CBD ၏ 300mg
အဆိုပါ Hemp CBD ဆေးတောင့်များကို ချစ်ပါ။ vegan နှင့် gluten-free များဖြစ်သည်။ 300mg ပရီမီယံ ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ် CBD ထုတ်ယူမှုဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ဆေးတောင့်တစ်ခုစီတွင် တိကျသောဆေးပမာဏအတွက် 5mg CBD ပါဝင်ပါသည်။ ဆေးတောင့်များသည် CBD ကမ္ဘာသို့ အသစ်ရောက်လာသူများအတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ အကြံပြုထားသော စတင်ဆေးသည် တစ်နေ့လျှင် 10mg ပမာဏရှိသော ဆေးတောင့် နှစ်တောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်း ဆေးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးနိုင်သည်။ စမ်းသပ်ကာလ.
ရိုးရှင်းသောသစ်ရွက် ထိပ်တန်းပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့် ဖော်စပ်ထားသော ပစ်မှတ်၊ အပင်အခြေခံထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ လျှော်ပင်သည် GMO မဟုတ်သည့်အပြင် USA တွင် စိုက်ပျိုးသည်။ ပင်မကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ချက်များကိုဖြေရှင်းရန် အထူးပစ်မှတ်ထားသည့် ဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်များကို သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ The Simple Leaf ၏ ဖော်မြူလာများသည် စားသုံးသူများ၏ တစ်မူထူးခြားသော ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဗီတာမင်များ၊ nootropics နှင့် adaptogens များဖြင့် မြှင့်တင်ထားပါသည်။
CBD Capsule ကြွက်သား + အဆစ်
စားသုံးမှုတစ်ခုလျှင် 20 မီလီဂရမ် CBD
ကြွက်သား + အဆစ် CBD အဆစ်များနှင့် ကြွက်သားများကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်သော အာဟာရဖြည့်စွက်စာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးတောင့်များတွင် acai ဘယ်ရီသီးမှုန့်၊ နနွင်း curcumin နှင့် arnica အမှုန့်များ အပါအဝင် အစွမ်းထက်သော ထုတ်ယူမှုများ ပါဝင်ပြီး ရောင်ရမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ပေးသည့် တုံ့ပြန်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ ဆေးတောင့်များသည် သက်သတ်လွတ်စားသူများဖြစ်ပြီး ဖြည့်စွက်စာများ မပါရှိပါ။ ၎င်းတို့သည် မျိုချရလွယ်ကူပြီး ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက် လျင်မြန်စွာသက်သာရာရစေသည်။ ဆေးတောင့်တစ်ခုလျှင် 20 mg CBD ဖြင့်၊ Muscle + Joint ဖော်မြူလာသည် ကျွန်ုပ်၏ လေ့ကျင့်ခန်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။
သန့်ရှင်းသော သဘာဝ သဘာဝကပေးတဲ့ အကောင်းဆုံးအရာတွေကို သင်ရရှိဖို့ သေချာပါစေ။ ခေတ်မီနည်းပညာဖြင့် စွမ်းဆောင်ထားသည့် Pure Natur သည် CBD ၏ အံ့သြဖွယ်ဂုဏ်သတ္တိများကို ကြွားဝါသော 100% သဘာဝထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ဇီဝရရှိနိုင်မှုနှင့် အမြင့်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို သေချာစေသည့် ထူးခြားဆန်းသစ်သော အအေးခံနည်းလမ်းကို အသုံးပြုထားသည်။ Solvents များသည် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် မပါဝင်ပါ — ရေနှင့် ဖိအားမျှသာ။ အခြေခံအားဖြင့်၊ လျှော်ပင်ကို ဓာတုဗေဒအရည်ပျော်ဆေးများမသုံးဘဲ ခေတ်မီစက်ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ညှစ်သည်။
Pure Natur Full-Spectrum CBD Capsules
စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော cannabinoid ပရိုဖိုင်
အဆိုပါ full-spectrum CBD capsules Pure Natur ၏ အဓိက ထုတ်ကုန်များထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ဆွဲဆောင်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးစွမ်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဤဆေးတောင့်များသည် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော cannabinoid ပရိုဖိုင်တစ်ခုပါရှိသည်။ micro-encapsulation ဖော်မြူလာကြောင့်၊ CBD အား ပရိုတင်းအလွှာများဖြင့် ကာကွယ်ထားပြီး ဆေးတောင့်၏ဇီဝရရှိနိုင်မှုကို တိုးစေသည်။ ထို့အပြင်၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ထုတ်ကုန်ကို အရသာမရှိစေပြီး 100% ရေတွင်ပျော်ဝင်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကို ကောင်းစွာခံစားခဲ့ရပြီး ၎င်းအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏အပြည့်အစုံတွင် သင်ပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ Pure Natur ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။.
ထိပ်တန်း CBD အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကျန်းမာသောအမြစ်များ ပွင့်လင်းမြင်သာသော လုပ်ငန်းကို ကျင့်သုံးပြီး ထုတ်ကုန်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် စားသုံးသူများ၏ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ပါ။ ဤသည်မှာ ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားလှယ်က ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မျှဝေထားသည်- "ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုများတွင် အာနိသင်၊ ခိုင်ခံ့မှု၊ လေးလံသောသတ္တုများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများ၊ ရောဂါပိုးမွှားပါဝင်မှုများအပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အတွက် ကျန်ရှိသောအညစ်အကြေးများပါဝင်ပါသည်။ ဤစမ်းသပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် အလှကုန်များမှ အလှကုန်အထိ ပါဝင်ပစ္စည်းများအပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏မွေးရာပါသူငယ်ချင်းများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များအထိ ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို အသုံးပြုထားသည်။”
softgel တစ်ခုလျှင် 10mg CBD
ကျန်းမာသောအမြစ်များ Full-Spectrum Soft Gel CBD Capsules
အဆိုပါ full-spectrum soft gel capsules ဆေးတောင့်တစ်ခုလျှင် CBD ၏ 10mg ကြွားဝါပြီး CBG၊ CBN နှင့် CBC ကဲ့သို့သော အခြားသော အကျိုးပြု cannabinoids များပါရှိသည်။ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အရွယ်အစား အပြည့်အစုံဖြင့် ရရှိနိုင်သော ဤ CBD capsules များသည် နာကျင်နေသော ကြွက်သားများကို သက်သာစေရန်နှင့် ပြေလျော့စေရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် စိုးရိမ်သောကလက္ခဏာများကို ထိန်းထားရန်နှင့် အိပ်စက်ခြင်းသံသရာကို ထိန်းညှိပေးသည်။
Altwell Milk Muscle ဖန်တီးသူများနှင့် Tone-Up ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Karena Dawn တို့ ပူးပေါင်းတည်ထောင်သည့် အသစ်တည်ထောင်ထားသော CBD အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည် ခန္ဓာကိုယ်၊ စိတ်ဝိညာဉ်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ကော်လိုရာဒိုတွင် စိုက်ပျိုးထားသော CBD ကို အသုံးပြုပြီး မျိုးစေ့မှ စင်အထိ ထုတ်လုပ်မှုကို ကြီးကြပ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏အလေ့အကျင့်များကို အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြကာ ထုတ်ကုန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုလုံးအတွက် COA များကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် အစွန်းရောက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ကတိပြုပါသည်။
Full Spectrum Hemp Flower Extract Softgells
softgel တစ်ခုလျှင် 20mg CBD
တစ်ထုပ်လျှင် Soft Gel 30 လုံး
Altwell Soft Gel CBD Capsules
အဆိုပါ soft gel capsules Altwell မှ full-spectrum hemp ပန်းထုတ်ယူမှု 20mg ပါဝင်ပါသည်။ နှစ်ပတ်ကြာ စမ်းသပ်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်သည် တစ်နေ့တာလုံး ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် ဤ CBD ဆေးတောင့်များကို အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ မနက်ခင်းမှာ ဆေးတောင့်တစ်တောင့်သောက်ရင် အာရုံစူးစိုက်မှု ပိုအားကောင်းလာစေတယ်။ ဒါ့အပြင် စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ နောက်ကြောင်းပြန်အစည်းအဝေးတွေကို သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ရာမဝင်ခင် ယူဆောင်သွားသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်၏ အိပ်စက်မှုသည် ကောင်းမွန်လာပါသည်။ ဒါ့ထက် ပိုတာက ညလယ်မှာ မနိုးဘဲ နာရီတွေကြာကြာ အိပ်နေတာကို သတိထားမိတယ်။
PureKanaစျေးကွက်ရှိ ထိပ်တန်း CBD အမှတ်တံဆိပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော မူပိုင်ခွင့်ဖော်မြူလာများနှင့် CO2 ထုတ်ယူမှုကို အသုံးပြုသည်။ လျှော်ပင်ကို Kentucky တွင် စိုက်ပျိုးပြီး ရိတ်သိမ်းသည်။ ထို့အပြင် ထုတ်ကုန်များသည် vegan များဖြစ်ပြီး အရသာရှိသော သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်က အခုလို ပြောပါတယ်။ "နောက်ဆုံးရလဒ်မှာ gummies၊ tinctures နှင့် sleep-aids ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာများစွာ၏ အကောင်းဆုံးသော ထုတ်ကုန်များ ပေါင်းစပ်ထားသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။"
PM CBD Capsules
Melatonin နှင့် L-Theanine
PureKana PM CBD Capsules
အဆိုပါ PM CBD ဆေးတောင့်များ ကျန်းမာစွာအိပ်စက်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးသောကြောင့် ညအချိန်အသုံးပြုရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ မူပိုင်ခွင့်ဖော်မြူလာတွင် CBD၊ L-Theaninehemp၊ melatonin နှင့် Gaba ၏ 25mg ပါဝင်သည်။ အိပ်ရာမဝင်ခင် နာရီဝက်အလိုမှာ CBD capsule တစ်လုံးသောက်သင့်ပါတယ်။ ရလဒ်တွေက အရမ်းကောင်းတယ် — သင်ပုံမှန်ထက် ပိုမြန်ပြီး အိပ်ပျော်သွားမှာဖြစ်ပြီး စိမ့်စက်ဝန်းက ပိုရှည်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ထက်မက၊ ဆေးတောင့်များသည် သင့်ကို ငိုက်မျဉ်းစေမည်မဟုတ်သော်လည်း နောက်တစ်နေ့တွင် လန်းဆန်းပြီး ခွန်အားဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် နေ့စဥ်သုံးရန် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ တစ်ဖက်တွင် တစ်ခုတည်းသော အားနည်းချက်မှာ စျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ ဆေးတောင့်တွေက တော်တော်စျေးကြီးပေမယ့် ရလဒ်ကောင်းတွေကို ထည့်စဉ်းစားရင် ပေးရတဲ့တန်ဖိုးက ကောင်းပါတယ်။
သက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့် ပရီမီယံအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များကို ရှာဖွေနေပါက၊ စဉ်းစားပါ။ နု x. ဤတီးဝိုင်းသည် CBD စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အရည်အသွေးနှင့် သန့်ရှင်းမှုမြင့်မားသော စံနှုန်းများကို သတ်မှတ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးသည် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပြီး အရသာမျိုးစုံကို ရရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Nu-x သည် ဂိမ်းကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ပက်ကေ့ဂျ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။
အပျော့စားဂျယ်တစ်ခုလျှင် CBD ၏ 15mg
တစ်ထုပ်လျှင် ၁၀ တောင့်
နု x CBD ထုတ်ကုန်များ
အဆိုပါ Nu-x ၏ နူးညံ့သော ဂျယ်တောင့်များ USA စိုက်ပျိုးထားသော လျှော်ပင်မှ 15mg full-spectrum CBD ကို ပေးပို့ပါ။ ၎င်းတို့သည် GMO မဟုတ်သော နှင့် vegan များဖြစ်သည်။ အိတ်သေးသေးလေးမှာ soft gels ဆယ်မျိုးပါတာမို့ သွားရင်းလာရင်း အသုံးပြုရတာ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သင်သည် 100 capsules အပြည့်ထည့်ထားသောကွန်တိန်နာကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ နူးညံ့သော Gel များသည် မျိုချရလွယ်ကူပြီး တသမတ်တည်းရလဒ်များကို ပေးဆောင်သည်။ အိပ်ချိန်နဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှု ပိုကောင်းလာတာကို သတိထားမိတယ်။
လယ်သမားနှင့် ဓာတုဗေဒပညာရှင် ဆေးဝါးပညာရှင်များနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်များက 2019 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည် CBD သုံးစွဲသူများအတွက် အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံများကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းတို့သည် CBD အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးဆောင်သည့် သန့်စင်ပြီး ပိုမိုစုစည်းထားသော ဖော်မြူလာကို အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်္ဘောပေါ်တွင် ဆေးဝါးပညာရှင်များလည်း ရှိသောကြောင့် စားသုံးသူများသည် CBD နှင့် ပတ်သက်သော လမ်းညွှန်မှုနှင့် အကူအညီကို အမြဲရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
အားလုံးသည် ဂျယ်လ်—အနားယူရန်နှင့် သက်သာရာရစေသည်။
နူးညံ့သောဂျယ်ဆေးတောင့်တစ်ခုလျှင် CBD ၏ 25mg
တစ်ပုံးလျှင် 30 တောင့်
လယ်သမားနှင့် ဓာတုဗေဒပညာရှင် အားလုံးသည် Gel Soft Gel CBD Capsules ဖြစ်သည်။
All Gel က soft gel တွေပါ။ ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ် CBD 25 မီလီဂရမ်နှင့် melatonin 1 မီလီဂရမ်ပါဝင်သည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုသည် ညဘက်တွင် ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ခြင်းနှင့် အပန်းဖြေခြင်းကို အားပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့တွင် ရောင်ရမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီး အပျော့စားနာကျင်မှုများကို ကုသရန်အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ CBD soft gels များသည် မျိုချရလွယ်ကူပြီး နှစ်သက်ဖွယ် အစိမ်းရင့်ရောင်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ဆေးတောင့်များသည် THC နှင့် ပြင်းထန်သော ဓာတုပစ္စည်းများ ကင်းစင်ပါသည်။
အားလုံးသည် Gel ဖြစ်သည် — ပြန်လည်ဆန်းသစ်ပြီး သက်သာရာရစေသည်။
အပျော့စားဂျယ်တစ်ခုလျှင် CBD ၏ 25mg
အားလုံးက Gel Refresh ဖြစ်ပြီး နူးညံ့တဲ့ Gel တွေပါ။ တည်ငြိမ်သက်သာမှုကိုပေးစွမ်းရန် curcumin ကြွယ်ဝစွာပါရှိသည်။ ရောင်ရမ်းမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများ ကြွယ်ဝသော၊ ဤ CBD ဆေးတောင့်များသည် နာတာရှည် နာကျင်မှုနှင့် မသက်မသာများအတွက် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် သင့်အား အနားယူရန်နှင့် အလွန်ထိုက်တန်သော အနားယူမှုကို ရရှိရန် ကူညီပေးသည့် ငြိမ်သက်သောခံစားမှုကို ပေးဆောင်သည်။
ထုတ်ယူ Labs က
ထုတ်ယူ Labs က ကော်လိုရာဒိုအခြေစိုက် CBD ကုမ္ပဏီသည် ဝါရင့်သူတစ်ဦးမှ ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။စစ်မှုထမ်းဟောင်းအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူ CBD ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသက်သေခံခြင်းသည်လူတိုင်းကြိုးစားနိုင်သောထုတ်ကုန်များကိုစတင်ထုတ်လုပ်လိုသောဆန္ဒကိုတိုးပွားစေသည်။” 2016 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီသည် တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့် ပရီမီယံထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ Extract Labs သည် "အပင်အခြေခံကျန်းမာရေးကို လူတိုင်းလက်လှမ်းမီနိုင်စေရန်" ဆောင်ရွက်ရန် ရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့အထိ၊ ၎င်းကို BuzzFeed၊ Chive နှင့် Forbes ကဲ့သို့သော ထင်ရှားသောဆိုင်များတွင် ပြသထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ကုမ္ပဏီသည် Indo Expo တွင် အကောင်းဆုံး Isolate နှင့် အကောင်းဆုံး Extractor ဆုများကို ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ကယ်ဆယ်ရေးဖော်မြူလာ CBD Capsules
softgel တစ်ခုလျှင် 30mg CBD
1:3 CBD နှင့် CDC အချိုး
ထုတ်ယူ Labs က ကယ်ဆယ်ရေးဖော်မြူလာ CBD Capsules
အဆိုပါ ကယ်ဆယ်ရေးဖော်မြူလာ CBD နှင့် CDC ကို 1:3 အချိုးဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ထူးခြားသည်။ ဤ cannabinoids များသည် လျှော်ပင်၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ခိုင်ခံ့စေပြီး နာကျင်မှုကို သက်သာစေရန် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဖော်မြူလာသည် လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ရလဒ်များသည် နာရီများစွာကြာအောင် ကြာရှည်ခံသည်။ အဆက်မပြတ်နှင့် နာတာရှည်ဝေဒနာများအတွက်၊ နူးညံ့သောဂျယ်နှစ်မျိုးကို သောက်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်ကလည်း ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေအတွက် လုံလောက်ပါတယ်။
Spectrum PM Softgel Capsules အပြည့်အစုံ
CBN ၏ 10 မီလီဂရမ်
ထုတ်ယူ Labs က PM Soft Gel CBD Capsules
အဆိုပါ PM soft gels ပါ။ full-spectrum CBD 30mf နှင့် CBN 10mg ပါဝင်သည်။ ဤ cannabinoids နှစ်ခုသည် အိပ်မပျော်ခြင်းကို တိုက်ဖျက်ရန် အတူတကွ လုပ်ဆောင်သည်။ ညဘက် ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်စေဖို့အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ PM soft gels တွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြေလျော့စေပြီး ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေပါတယ်။ အိပ်ရာမဝင်ခင် ဆေးတောင့်တစ်တောင့်သောက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ မိနစ် 20 လောက်ကြာတော့ မင်းစိတ်တွေ ပြေလျော့သွားသလို မြန်မြန် အိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်။ စိတ်ကျရောဂါ ခံစားနေရပါက ဤပျော့ပြောင်းသော ဂျယ်များသည် ရောဂါလက္ခဏာများကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါသည်။
Full-Spectrum CBD Soft Gels
အပျော့စားဂျယ်တစ်ခုလျှင် CBD ၏ 33mg
အဆိုပါ full-spectrum soft gels များ Extract Labs မှ 33mg CBD ပါဝင်သည်။ အလွန်စုစည်းထားသော ဖော်မြူလာသည် ရလဒ်ကောင်းများကို သေချာစေသည်။ ၎င်းသည် လျင်မြန်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်သောကြောင့် မိနစ် 30 ခန့်အတွင်း အပင်တစ်ပင်လုံး၏ အကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပျော့ပြောင်းသော ဂျယ်လီများသည် အဆင်မပြေမှုများကို ပြေလျော့စေကာ သင့်ကို ပြေလျော့စေကာ တစ်နေ့တာဖြတ်သန်းရန် ပိုမိုစိတ်အားထက်သန်လာစေသည်။
Leafwell ရုက္ခဗေဒ 2016 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော မိသားစုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုင်ရှင်များက ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေထားသည်- "ကျွန်ုပ်တို့အတွက်၊ ၎င်းသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ချစ်ခင်ရသူများ၏ဘဝများကို သိသိသာသာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။ Luis သည် 2019 နှစ်ကုန်ပိုင်းနှင့် 2020 ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်တွင် (ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းလောက်အောင် ယနေ့တွင်) lymphoma ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အတူ၊ ထိုသို့သောရောဂါရှာဖွေခြင်း၏ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ရိုလာကိုစတာကို လမ်းညွှန်နိုင်ရန် Abe ၏ညီမထံသို့ ရောင်စဉ်အစုံအလင်ကို အသုံးပြု၍ ရောင်စဉ်မီလာဖျော်ရည်များကို အသုံးပြုကာ၊ သူမ၏ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ရန်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ရော မိသားစုတွေ နေ့စဉ်သုံးတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ထုတ်လုပ်ပါတယ်။”
နူးညံ့သောဂျယ်တစ်ခုအတွက် 25mg/40mg CBD
ကျယ်ပြန့်သော ရောင်စဉ်နှင့် ရောင်စဉ်အပြည့် ရွေးချယ်စရာများ
Leafwell ရုက္ခဗေဒ Soft Gel CBD Capsules
အဆိုပါ Leafwell soft gels များ ခိုင်ခံ့မှုနှစ်မျိုး- ဂန္ထဝင်နှင့် အားကောင်းသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့ကို ကျယ်ပြန့်သော ရောင်စဉ်နှင့် ရောင်စဉ်အပြည့် ပုံစံကွဲများဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။ Soft Gel များသည် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည် ။ နာကျင်မှုကို သက်သာစေရန် မိနစ် 20-30 ခန့်ကြာသည်။ နာကျင်သော ကြွက်သားများအတွက် ကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး ဤထုတ်ကုန်သည် ကျွန်ုပ်၏ အားကစားခန်းမတွင် အဓိကဖြစ်လာပါသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် ညဘက်တွင် ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးပြီး သင့်ကို ကောင်းမွန်စွာ အနားယူစေပါသည်။
altwell hemp extract ပန်းပွင့်တောင့်များ
cbd soft gels များ
ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ရောင်စဉ်အပြည့် cbd ဆေးတောင့်များကို ထုတ်ယူပါ။
ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ထုတ်ယူထားသော ဂျယ်ပျော့တောင့်များ
ဓာတ်ခွဲခန်း ကယ်ဆယ်ရေးဖော်မြူလာကို ထုတ်ယူပါ။
လယ်သမားနှင့်ဓာတုဗေဒပညာရှင်အားလုံးသည် gel cbd ဆေးတောင့်များဖြစ်သည်။
justcbd multivitamin ဖော်မြူလာ
nu-x soft gels များ
purekana ညနေ soft gels
ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2021
Love Hemp ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
နိုဝင်ဘာလ 16, 2021
Pure Natur CBD ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း 2022
လူနာတစ်ဦးစီသည် ထူးခြားသော၊ တစ်ဦးချင်းချဉ်းကပ်မှု လိုအပ်ကြောင်း နက်ရှိုင်းစွာ ယုံကြည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် အလုပ်တွင် မတူညီသော စိတ်ကုထုံးနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏လေ့လာမှုအတွင်း၊ လူတစ်ရပ်လုံးအပေါ် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိတ်ဝင်စားမှုနှင့် စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ခွဲခြားမထားသော ယုံကြည်ချက်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၏ အရေးပါမှုကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အားလပ်ချိန်များတွင် စာဖတ်ခြင်း (သည်းထိတ်ရင်ဖို ဝါသနာရှင်) နှင့် တောင်တက်ခြင်းများကို နှစ်သက်ပါသည်။
PAW CBD သုံးသပ်ချက်
မူရင်း စပါးပင် သုံးသပ်ချက်
REAKIRO ပြန်လည်သုံးသပ်ချက် 2022
2022 တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Austin နှင့် Kat Cbd ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
SWISSCANNALIFE ပြန်လည်သုံးသပ်ချက် 2022